Ama-Connectors Manufacturers - I-China Connectors Factory & Suppliers
✭Ngokwanda okuqhubekayo kwemakethe yamarobhothi, izinkampani eziningi ezikhiqiza amarobhothi seziqalise ukuncintisana okunzima kakhulu. Impilo yokusebenza kwerobhothi, ukunciphisa umsindo seyiyinkinga enkulu yezobuchwepheshe. Le ngxenye ye-servo servo encane encane idlala indima ebaluleke kakhulu, ngoba ilunga ngalinye lerobhothi lidinga i-servo ukufeza izenzo ezihlukile.
✭Ingxenye yethu yepulasitiki yingxenye yezindlu zamagiya wokuqondisa we-servo, futhi okokusebenza kwepulasitiki okusetshenzisiwe kusebenza okuphezulu kwe-PA66 + 30GF. Ngaphansi kokusebenza kwamagiya egiya lokuqondisa le-servo, ingaqinisekisa ukuthi igobolondo lepulasitiki ngeke likhubazeke futhi lihlale lizinzile lapho kuhamba amagiya. Leli gobolondo lepulasitiki linezidingo eziphakeme kakhulu ngokunemba kwesikhunta, ikakhulukazi ukubekezelela ngamehlo komgodi wokubeka igiya, ukuqinisekisa ukuthi kuphakathi kobubanzi bokubekezelelana obungu-0.005mm. Izinto zethu zesikhunta zenziwa kusetshenziswa izinto ezingenisiwe ezivela eBecu naseS136.
✭Leli gobolondo lepulasitiki lakhiwe ngamagobolondo amathathu epulasitiki, igobolondo eliphezulu, igobolondo eliphakathi negobolondo eliphansi. Kumele zihambisane kahle ukuqinisekisa ukuthi indawo ephakathi nendawo yomgodi wokubeka igiya iyahambisana. Ngakho-ke, kulolu hlobo lwezingxenye zepulasitiki ezinemba kahle, umgodi wesikhunta u-2 kuphela, ukuze usayizi ulawulwe kangcono.